Mhoro shamwari, pane yedu saiti Kugadzira mitsara muchiGerman Pane zvakawanda zvinyorwa zvine chekuita nemusoro wenyaya. Vazhinji veshamwari dzedu vanoda kuti isu tigadzirire zvidzidzo zvedu pakugadzira mitsara muchiGerman.
Pamusoro pekukumbira kwako, isu takanyora izvo zvidzidzo zvatakagadzirira pakugadzira mitsara muchiGerman, kubva zero kusvika kumberi, zvinotevera. Unogona kuverenga zvidzidzo zvedu zveGerman imwe neimwe, kutanga kubva pachidzidzo chekutanga.
Kupa ruzivo hupfupi nezvekugadzira mitsara muchiGerman;
Kugadzira Mutongo wechiGerman Nyaya yacho ndeimwe yemisoro yakakosha iyo inofanirwa kuzivikanwa mumatanho ekutanga ekudzidza echinyakare chiGerman. Kuti mutongo uumbwe, mazwi mumabasa akasiyana anofanirwa kuuya pamwechete uye kugadzira kutaura kunoreva. Pakuvaka mutongo, mazwi acho ane nhevedzano inonzi maficha echirevo. Izvo zvinogona kuoneka kuti izvo zvinhu zvinoumba mutongo zvinoumbwa neshoko rimwe kana mamwe mazwi.
Mumwe mutemo wegirama unotarisirwa mukugadzira mitsara muchiGerman. ChiGerman chakaenzana '' Hauptsatz '' Nyaya mune zvese '' Subjeckt '', chiito 'Chiito' uye kuramba '' chibvumirano '' inoshandisa chinzvimbo. Kunyanya muchiGerman, kuvaka kwekutanga kwemitsara kunoitika nenzira iyi, ndiko kuti, chiito chinoiswa mumutsara wechipiri.
Paunoverenga zvidzidzo zvedu pazasi, iwe uchaona kuti zvakadzama sei uye zviri nyore kunzwisisa, iwe uchaona maitiro ekuita mitsara muchiGerman.
Pamusoro Kugadzira mitsara muchiGerman Iwe unogona kuverenga izvo zvidzidzo zvakateerana. Tinovimba kuti iwe uchabatsirwa zvakanyanya kubva kumatopiki edu anotsanangurwa muTurkey zvakafanana.